မာလီ: Mopti အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်တွင်းစစ်ချောက်ကမ်းပါးမှဒေသတွင်းကယ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် - Tele RELAY တစ်ခု - JeuneAfrique.com
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "မာလီ: ပြည်တွင်းစစ်ချောက်ကမ်းပါးမှဒေသတွင်းကယ်ဖို့ Mopti အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအစီအစဉ်များ - JeuneAfrique.com
မာလီ: Mopti အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်တွင်းစစ်ချောက်ကမ်းပါးမှဒေသတွင်းကယ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် - JeuneAfrique.com
2012 အတွက်ဗဟိုဆိုမာလီယာအတွက် Mopti ဒေသတွင်း၌မာလီစစ်သား။ © AP / SIPA
Mopti ၏ဇွန်လနှောင်းပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်, အထွေထွေ Abdoulaye Cisse မာလီလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ၏ဗဟိုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ရှောက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပါသလဲ? 1990 နှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားအတွက်ချိုးဖောက်မှုများစွပ်စွဲသူငြင်းဆိုနှင့်သူ၏စစ်တပ်အတှေ့အကွုံစောဒကတက်သည်။
Little ကအဆိုပါ Mopti ဒေသတွင်း၌မသိ, အထွေထွေ Abdoulaye Cisse လက်ထက်ကောင်းစွာ, ဂိုဏ်းဂဏစွဲအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်နှောငျ့ဒီအထိခိုက်မခံဧရိယာထဲမှာအခြေအနေကကျွမ်းကျင် အထူးသဖြင့် Dogon နှင့်ဖူလာနီအသိုင်းအဝိုင်းကြားက။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်သူ၏ချိန်းသည်တိုင်အောင်, ဇွန်လကုန်မှာစစ်တပ်သားစင်တာနှင့်မြောက်ဘက်တွင်စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ခံ, လက်နက်ကိုင်များ၏အထွေထွေဝန်ထမ်းဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်သူ၏သစ်ကိုမစ်ရှင်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးCisséတစ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကအကြမ်းဖက်သည်များ, သစ်တောများနှင့်တောင်များရှာဖွေ, အဆက်မပြတ်ရွေ့လျား, ဒေသတွင်း၌တပ်ဖြန့်ထားကြောင်းစစ်သား 3000, ဒါပေမယ့်လည်းလူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ပါ" ဟုသူကရှင်းပြသည် Jeune Afrique.
တူနီးရှား: Nabil Karoui ၏ဖမ်းဆီးခြင်း, သမ္မတများအတွက်အကြိုက်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးတည်း - JeuneAfrique.com
သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား: Nessma TV ကို Zitouna ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်ကင်ပိန်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်တားမြစ်ထား - JeuneAfrique.com
Windows ကို 10 အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကီးဘုတ် input ကိုကိုသက်ဝင် - သိကောင်းစရာများ
တရားသဖြင့်စီရင်Mylène Demongeot နှင့် Sami Naceri လိမ်လည်သူဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်
အိန္ဒိယ: အဆိုပါ PMO PK Misra, Ajit Doval နှင့် PK Sinha ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ဒေသများအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် | အိန္ဒိယသတင်း
အသေသတ်ခြင်းကို Stranding: Hideo Kojima ယင်းကို Safe House ကဆမ်ပေါ်တာ Bridges မိတ်ဆက်
အိုင်ဗရီကို့စ်ဘောလုံး: မာ့ခ် Zoro ဟာ IFF နှင့် Sidi Diallo တိုက်ခိုက်
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,486